समाचार - देवी महोत्सव ， FAYGOUNION फूल व्यवस्था सैलून
देवी महोत्सव ， फ्याग्युनिशन फूल व्यवस्था सैलून
देवी महोत्सव आइपुगेको छ, र फेयगुनियनले देवीहरूको लागि फूल सजावट सैलूनको व्यवस्था गरेको छ। फूलहरु को नाम मा, चिनियाँ देवी एक साथ फूलहरु को चक्कर मा जान्छन्। म तपाईलाई सबै खुशीको देवी दिवसको शुभकामना दिन्छु!
गुलाब, प्लाटिकोडन, कार्नेसन, डेजी, शिक्षकले सबैलाई आज एकपटक फूलको किसिमको फूल प्रयोग गर्ने परिचय गराए, र धैर्यपूर्वक विभिन्न किसिमले विभिन्न फूलहरू कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर सिकाउनुभयो। फूलको व्यवस्था आधिकारिक रूपमा सुरु भएपछि, शिक्षकले सबैलाई उनीहरूको प्राथमिकता अनुसार एक रूपरेखा सम्मिलित गर्न, र त्यसपछि गुलाबलाई मुख्य फूलको रूपमा प्रयोग गर्न, र त्यसपछि अन्य फूलहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा उचाईको छेउमा घुसाउन र अनफ्लु budर्ड कलहरू प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। सम्पूर्ण देखिनका लागि विस्तार। यो बाहिरी विस्तार जस्तै महसुस गर्दछ।
यद्यपि फूलहरूको प्रकारहरू सबैका लागि समान रूपमा हुन्छन्, प्रत्येक देवीको निपुण हातमुनि, प्रत्येक भाँडामा फुलेको फूल फरक हुन्छ।
फूलहरू सलोन सजाएपछि, फ्लाइ P पिगोन फ्यानसिअर्सले पनि देवीदेवताहरूका लागि केकहरू तयार पारे!
र, आज पुष्प शिक्षकको जन्मदिन पनि हो! त्यो मात्र होईन, यस महिना दुई साना परियों, जिओ चेन र फ्लाइंग पिजन फ्यानर्सको जिओ यांगको जन्मदिन महिना पनि हो। यो अवसर लिँदै, सबैजनाले उनीहरूलाई बर्थडे अभिवादन गीत पठाए ~
महिला फूलहरू जस्ता हुन्, र फूलहरू सपनाहरू जस्ता खिलछन्।
मलाई आशा छ कि फ्लाइंग कबूतर फनसिअर्सका देवीहरू आफ्नै सूर्य बन्न सक्छन्! तिम्रो आँखामा उज्यालो हुन सक्छ! विश्वका सबै महिलाहरू खुशी रहून् र सदाका लागि उनीहरूका आफ्नै रानी बन्न सकून्।
एकल वाल नालीदार पाइप लाइन, एचडीपी डबल वाल नालीदार पाइप उत्पादन लाइन, एकल वाल नालीदार पाइप मेशीन, डबल वाल नालीदार पाइप मेशीन, एचडीपी नालीदार पाइप एक्सट्रूसन लाइन, पीई / पीपी / पीभीसी नालीदार पाइप उत्पादन लाइन,